‘हाम्रो टेक्नोलोजी’ र ‘सिभिल बैंक’को सहकार्य : सहकारी तथा वित्तीय संस्थाले पनि एटीएम सेवा दिने | गृहपृष्ठ
Home बजार ‘हाम्रो टेक्नोलोजी’ र ‘सिभिल बैंक’को सहकार्य : सहकारी तथा वित्तीय संस्थाले पनि एटीएम सेवा दिने
on: ११ बैशाख २०७६, बुधबार ०७:१३ बजार
Latest posts by सुप्रिम तिवारी (see all)
७ दशकको बीमा बजार : अधिकांश क्षेत्र बीमाको दायरामा -
‘हाम्रो टेक्नोलोजी’ र ‘सिभिल बैंक’को सहकार्य : सहकारी तथा वित्तीय संस्थाले पनि एटीएम सेवा दिने -
निर्माण क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ३ खर्ब लगानी -
काठमाडौं । अब सहकारी तथा वित्तीय संस्थाले पनि आफ्ना ग्राहकलाई एटीएम सेवा दिने भएका छन् । ‘हाम्रो टेक्नोलोजी प्रालि’ र ‘सिभिल बैंक’को सहकार्यमा उक्त सेवा केही दिनभित्रै शुरू गर्न लागिएको हो ।
सिभिल बैंकका मुलुकभर ६८ ओटा एटीएम छन् । हाम्रो टेक्नोलोजीसँग २०० भन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारी आबद्ध छन् । अब यी संस्थाका ग्राहकले सिभिल बैंकको कुनै पनि एटीएम मेशिनबाट ‘कार्डलेस क्यास’ प्रविधि मार्फत रकम झिक्न पाउनेछन् । एक पटकमा रू. ५०० देखि २५ हजार सम्म निकाल्न पाइनेछ र त्यसबापत रू. २५ शुल्क लाग्नेछ । यो सुविधा रेमिट्यान्समा पनि लागू हुनेछ ।
‘कार्डलेस क्यास’का लागि ग्राहकले आफ्नो खाता रहेको विकास बैंक, फाइनान्स वा सहकारीको मोबाइल बैंकिङ एपमार्फत आफूलाई चाहिएको रकम माग गर्नुपर्नेछ । यसबाट खातामा दर्ता भएको मोबाइलमा ओटीपी (वान टाइम पासवर्ड) कोड नम्बर एसएमएस मार्फत आउँछ । त्यो कोड लिएर नजिकैको सिभिल बैंकको एटीएममा गई टाइप गर्नुपर्छ । ओटीपी कोड नम्बर २ घण्टाका लागि मात्र सक्रिय हुने भएकाले सो अवधिभित्र रकम झिकिसक्नुपर्नेछ । हरेक ट्रान्जेक्शनका लागि छुट्टाछुट्टै ओटीपी कोड पठाइने भएकाले यो सुविधा सहज र सुरक्षित हुने कम्पनीको भनाइ छ ।
सिभिल बैंकले २०७० सालमा स्थापना गरेको ‘कार्डलेस क्यास’ प्रविधिलाई ‘हाम्रो टेक्नोलोजी’ले पुनः सञ्चालनमा ल्याएको सो कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विष्णु महर्जनले जानकारी दिए । उनले भने, ‘एटीएम सुविधा नदिएका वित्त तथा फाइनान्स कम्पनी र सहकारी संस्थाहरूले ग्राहकलाई यस्तो सुविधा दिन सकून् भनेर बैंकसँग सहकार्य गरिएको हो ।’ हाल एटीएम सेवा वाणिज्य बैंक तथा केही विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरूले मात्रै दिँदै आएका छन् ।
हाम्रो टेक्नोलोजी प्रालि २०७३ साउन ११ मा स्थापना भएको हो । यसले बैंक, वित्त कम्पनी र वित्तीय संस्थाहरूमा विद्यमान तर सक्रिय नरहेकोे मोबाइल बैंकिङ प्रक्रियालाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने काम गर्छ । कम्पनीले २०७४ सालमा एमबैंक नामक प्लेटफर्म स्थापना गरेको थियो । सोही प्लेटफर्मको सहायताले कम्पनीहरूको मोबाइल बैंकिङ प्रणाली मार्फत यस्तो सुविधा प्रयोग गर्न सकिनेछ । कम्पनीहरूको कोर बैंकिङ सिस्टम हुन्छ, जसमा हाम्रो टेक्नोलोजीले मोबाइल बैंकिङ प्रणाली प्रयोग गर्न सकिने बनाइदिन्छ । यसको माध्यमबाट मोबाइल रिचार्जदेखि बीमाशुल्कसमेत तिर्न सकिने कम्पनीले जानकारी दिएको छ ।